Apple Inoburitsa iOS 12.4 ye iPhone, iPad uye HomePod | IPhone nhau
Masikati ekuvandudzwa paApple nekumisikidzwa kweshanduro nyowani dzayo ese mapuratifomu, kunyangwe emidziyo yatomiswa. Imwe yadzo yanga iri iOS 12.4 ye iPhone, iPad uye kunyangwe yeiyo HomePod. Iyi vhezheni nyowani ikozvino yakagadzirira kurodha pane edu maidzi.
Kunyangwe mumaBetas apfuura pakanga pasina shanduko huru, iyi vhezheni yepamutemo inounza nhau dzinonakidza mukuwedzera kune mhinduro kune mamwe akaonekwa mabugs. Isu tichakuudza nezvazvo pazasi.
1 Chii chitsva muIOS 12.4
2 ImbaPod 12.4
Chii chitsva muIOS 12.4
Imwe yezvinhu zvitsva izvo zvakashamisa zvakanyanya mune ino nyowani yekuvandudza yave iri chinhu chitsva chekufambisa chinokutendera kuti utore zvemukati kubva kune imwe iPhone uchienda kune imwe zvisina waya panguva yegadziriro nyowani yekumisikidza kifaa. Icho chinhu chakanakira kana iwe ukawana chishandiso chitsva uye usingade kurasikirwa nezviri mukati cheiyo yekare.
Pamusoro pezvo pane zvakare kuvandudzwa kweNews application, izvo zvatinoyeuka izvozvi zvinobvumidza kunyorera kumagazini, kunyangwe parizvino isiri kuwanikwa kuSpain kana kune dzimwe nyika dzinotaura chiSpanish. Pane izvo zvisina kana mutsindo iApple Kadhi, Apple kadhi iyo inofanirwa kuvhurwa neIOS 12.4 chirimo chino, asi isu hatizive chero chinhu nezvazvo kupfuura kwayakaratidza mwedzi mishoma yapfuura.
Pamusoro peiyo vhezheni ye iPhone ne iPad, Apple yakaburitsa gadziriso kune imwecheteyo vhezheni yePodPod. Mutauri weApple achakurumidza kuwanikwa kutenga muJapan neTaiwan, uye iyi vhezheni itsva inogadzirira kuvhurwa uku, pasina dzimwe nhau dzakakosha dzakaonekwa kusvika pari zvino. Iyo yekuvandudza pane iyo HomePod inoitika otomatiki, kunyangwe kana iwe uchida kuzviita nemaoko unogona kuimanikidza kubva kuImba application, mukati meyako Mamiriro Ekumba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 12 » Apple inoburitsa iOS 12.4 ye iPhone, iPad uye HomePod
Ndingade kuziva kurodha pasi mitambo nemaapplication pane yangu iPad neiyo iOS 10.3.3 vhezheni